7 kamid ah Al-shabaab oo xalay lagu diley degmada Jilib | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA 7 kamid ah Al-shabaab oo xalay lagu diley degmada Jilib
7 kamid ah Al-shabaab oo xalay lagu diley degmada Jilib
Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa amrey howlgal gaar ah oo lagu diley todobo kamid ah maleeshiyaadka Al-shabaab oo ku sugnaa degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe.
Howlgalka oo dhacay xalay ayaa waxaa si wadajir ah u fuliyay ciidanka Kumandooska Soomaaliya oo kaashanaya kuwa saaxiibada caalamka.
”Ciidankeena amniga ayaa diley todobo kamid ah maleeshiyaadka argagaxisada Al-shabaab oo ay ku jiraan horjoogiyaal sare oo mas’uul ka ahaa qaraxyo badan oo ka dhacay magaalada Muqisho,” ayuu madaxweynaha ku yiri war qoraal ah.
Warkan, ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweyah jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ay ka go’an tahay ciribtirka Al-shabab awooda ay u leyihiin in ay fuliyaan weerarada macnada darada ah oo ay la beegsanayaan shacabka Soomaaliyeed, bulshada bariga Afrika iyo guud ahaan caalamka.
Previous articleShirka Golaha Wasiirada oo lagu ansixiyey Sharicga La Dagaalanka Argagaxisada, laguna go’aamiyey in Dhabaha Diyaaradaha ku soo degaan 150 mitir aan la degi karin iyo arrimo kale.
Next articleGuddoomiyaha G/Banaadir Taabit oo sharraxaad ka bixiyay wax-yaabihii u qabsoomay